Ogaden News Agency (ONA) – Xubnaha Jaaliyadda Xassa ee Dalka Sacuudiga oo Shirkoodii Caadiga ahaa u Qabsoomay
Xubnaha Jaaliyadda Xassa ee Dalka Sacuudiga oo Shirkoodii Caadiga ahaa u Qabsoomay
Waxaa shirkoodii caadiga ah oo labadii todobaad mar dhaca lagu qabtay magaalada Xassa ee Dalka Sacuudi Carabiya. Shirkan oo ah shir ay isugu yimaadaan hawlwadeenka jaaliyada ayaa lagu gorfiyaa hawlaha jaaliyadda iyo waajibaadka la doonayo in la fuliyo mudada u dhaxaysa labada shir.
Waxaa kasoo qaybgalay shirka oo duruufa gaar ah oo mandiqada kusoo kordhay kusoo beegmay dhamaan xubnaha jaaliyadda oo gabdha iyo wiilalba leh. Shirka ayaa sidii caadada noo ahayd lagu furay aayada quraan ah iyo wacdi diini ah oo ku saabsanaa Ilaahay ka cabsigiisa iyo in loo midoobo halganka oo la’iska kaashado sidii loo taageeri lahaa N/hurayaasha CWXO.
Wacdigaa ka dib waxaa laguda galay ajendihii shirka iyadoo la falanqeeyay wixii u qabsoomay jaaliyadda labadii todobaad ee lasoo dhaafay iyo qorshaha cusub ee horyaala jaaliyadda. Waxaa si gaar ah looga hadlay xaaladda ay ku sugan yihiin jaaliyadda Yemen iyo qaxootiga halkaa dagan oo duruuf adag ay lasoo gudboonatay, iyadoo jaaliyadaha la faray inay arinta qaxootiga Yemen taakulayn u fidiyaan. Ugu dambayn shirka ayaa lagu go’aansaday qodobo muhiim ah iyo hawl-qaybsi.